ड्राईभर भाई सुजनले बस चलाउँदा चलाउँदै यति राम्री प्रेमिका पाए । बसमै देखेर लभ पर्यो, केटी भन्छिन्- बोली र बानी मन पर्यो (भिडियो हेर्नुस) – Sanjal Nepal
Homeसमाचारड्राईभर भाई सुजनले बस चलाउँदा चलाउँदै यति राम्री प्रेमिका पाए । बसमै देखेर लभ पर्यो, केटी भन्छिन्- बोली र बानी मन पर्यो (भिडियो हेर्नुस)
November 3, 2020 admin समाचार 4684
११ बर्षको उमेरमा गरिवीले पिरोलेपछि काठमाडौंमा आएर अनेकौं सँघार्ष गरेका सुजनको जीवन कथाले सबैलाई रुवायो र उनको कलाले सबैको मन लोभ्यायो । सबैको माया पाएपछि शिशिरले पहिलो अन्तर्वार्तामै गरेको बाचा पुरा गरे । उनले सुजनको गीत रेकर्ड गराए र भिडियो सहित बजारमा ल्याए । अहिले गीतको चौतर्फी चर्चा छ । सबैले गीतको शव्द र सँगीत सँगै गायक गायिकाको आवाजको तारिफ गरेका छन् । सुजन सँगै रचना रिमालले गीत गाएकी छिन् भने शिशिर भण्डारी आफैले शव्द र सँगीत भरेका छन् । यसैबिच बस चालक सुजन बाबू गुरुङ भाईसँग बसमै शताव्दिकाको नजर जुद्छ, भाईको बोली र बानीले युवती मोहित हुन्छिन् र उनीहरु बिच प्रेम बस्छ । सधै गाडी चढ्ने क्रममा माया बढ्दै जान्छ । यो सुजन भाईको दोस्रो गीत ‘एक झल्को’को कथा हो । कसरी बस्छ प्रेम ? के उक्त प्रेम सफल हुन्छ ? गीतको छायाँकन कसरी भयो ? सुजनले हालसम्म कति गीत गाए ? सुजन र शताव्दिकासँगको कुराकानी हेर्नुस
December 25, 2020 admin समाचार 2243
मानिसको शत्रु रोग समान अरु को हुन सक्छ र? रोगले सानू ठुलो बुढो तन्नेरी , गरिब कहाँ भन्छन् र? भर्खरै २१ बर्षको कलिलो उमेरमा नै पाठेघरमा संक्रमण भएर पित्तथैली र मृगौला मा समेत असर पार्दै
November 15, 2020 admin समाचार 14798
एजेन्सी । सामाजिक संजाल साथै अन्तराष्ट्रिय संचार माध्यममा एक समाचार यति धेरै फैलियो की जसको कारण थाहा पाउँदा जो कोही हैरान हुनेछन् । प्राप्त जानकारी अनुसार त्यहाँ भएको के रहेछ भने । एक व्यक्ति आँखा
गरिब परिवारकि छोरी करिश्मा पुन क्यान्सर पीडित उपचारको लागि सहयोगको अपिल (भिडियो सहित)
December 23, 2020 admin समाचार 1428
काठमाडौं । रुकुम पुर्वको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका १२ कि क्यान्सरपीडित करिश्मा पुनमगरको आर्थिक अभावका कारण उपचार गर्न समस्या भएको छ । सामान्यतया गाउँमा खेति किसानी गरेर गुजारा गर्ने पुन परिवारमा गरिबीको कारणले उपचार गर्न समस्या
LEX 18 agenda conversation: Job club (541160)